Qalabka Induction Is-beddelka Qalabka, Qalabka wax-qabadka induction-ka
Qalabka tamarta ee HLQ CO, LTD (Magaca hore: Daewe Induction Machine Machine Co., Ltd) wuxuu ku takhasusay makiinadaha kuleylka kuleylka iyo mashiinnada alxanka ultrasonic wax soo saarka iyo suuqgeynta wixii intaa ka badan ka badan 15 sano. Mashiinadu waxay daboolayaan Qalabaynta Qalabaynta Qalabka & Qalabka Mashiinka, mashiinka alxanka caagga ah ee ultrasonic, alxanka birta ee ultrasonic, Qalabka Mashiinka Kuleylka ee Qaboojiyaha Hawada, Nidaamyada Kala-baxa ee Is-bedbeddelka, Isugeynta Foornada Foornada, Nidaamka Is-beddelka Qalabaynta, Aluminium iyo Foornooyinka Maqaarka ah, Nidaamyada Daaweynta Isku-dhafan ee Isku-dhafan. Welders Tube & Nidaamyada Tooska ee Heerkulka. Waxay si duurxul ah loogu isticmaalaa daaweynta kuleylka, isku xidhka, xayiraadda, alxamida, foojignaanta, dhalaalida, kululaynta iyo xalka kulaylka.
Mashiinnada kuleylka ee induction adeegso qaybaha korantada ee ugu horumarsan iyo farsamooyin casri ah oo heer sare ah. Waxay sidoo kale dhex geli karaan nonmetal si ay u kululeeyaan biraha illaa ay birtu isku gaarto iyaga oo aan la xiriirin biraha
toos ah. Isbarbar dhig hababka kale ee kululaynta, mashiinkeena kululeynta induction wuxuu leeyahay faa iidooyin badan: xaalad adag oo buuxda, is-xakameyn iyo is-difaacid. Waxay ku bilaabmaysaa cadaadis loo baahan yahay iyo biyo, waxay qaadanaysaa meel dabaqa ka yar waxayna u baahan tahay bilow bilaw iyo waqti xirid, kuleyliyaha si nabad gelyo leh, feejignaan la'aan iyadoo aan wasakheyn.
Horumarinta shirkadda, shirkadeena waxay fiiro gaar ah siineysaa cilmi baarista & horumarinta iyo adeegga iibka kadib. Waxaan u hoggaansameynaa ISO9000-2000 si adag hawshayada. Shirkadeena waxay ku guuleysatey magac caan ah mashiinkeena tayada sare leh oo wanaagsan.
liiska kuleylka induction induction
naqshadaynta dhejinta kululaynta induction
Induction Iskeelitirka Coil Design iyo Nashqada Aasaasiga ah